Himalaya Dainik » प्रचण्डको निवासमा घु’स्यो कोरोना
काेराेनाकाे माहामारीमा अहिले बिश्वभर कोरोना संक्र मितको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौंसहित देशभर सामूहिकरुपमा बस्दै आएकाहरुलाई कोरोना देखिन थालेको छ। काठमाडौंमा विशिष्ट ब्यक्तिसंग सम्बन्ध भएकाहरु कोरोना संक्र मित हुन थालेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुमलटारस्थित निवास सुरक्षार्थ ६ जना प्रहरीलाई कोरोना पुष्टि
यस अघि सभामुख अग्नी सापकोटाको सुरक्षाकर्मीमा पनि कोरोना पुष्टि भएको थियो । तर अग्नी सापकोटाको स्वाव परिक्षण गर्दा उनको परिणाम नेगेटिभ आएको थियो । प्रचण्डको परिवारका सदस्यसहित निवास र उनको सुरक्षामा तैनाथ प्रहरीको स्वाब लिएर गरिएको परीक्षणमा ६ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको हो। काठमाडौंमा कोरोना संक्र मितको संख्या बढ्न थालेपछि जोखिममा रहेकाहरुको परिक्षण बढाइन थालेको छ ।
सरकारी कार्यालय र विशिष्ट ब्यक्तिहरुको निवासमा पनि परिक्षण बढाइएको हो । प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटा जुगलले परिवारका सदस्यसहित सुरक्षाकर्मीको पनि स्वाब परीक्षण गराउँदा ६ जनामा कोरोना देखिएको हो। सुरक्षाकर्मीहरुलाई कोरोना पुष्टि भए पनि प्रचण्ड परिवारका सदस्यहरुको भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार निवासको सुरक्षामा बाहिरी घेरामा रहेका ६ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको हो। बुधबार मात्रै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवमा पनि कोरोना देखिएको थियो। उनले काठमाडौंमा आएर गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहितलाई भेटेर आइतवार जनकपुर फर्किएका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनका परिवारका सबै सदस्यको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । बुधबार प्रचण्डका परिवारिक, सचिवालय सदस्य र सुरक्षाकर्मीको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत ६ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिए पनि प्रचण्डका परिवारका सदस्य र सचिवालयका सदस्यको भने नेगेटिभ देखिएको हो ।
‘अध्यक्ष लगायत हामी सम्पुर्ण परिवारका सदस्यहरु, सुरक्षाकर्मीहरु र सचिवालयका सदस्यहरुले कोभिड १९ स्वाव परीक्षण गर्दा, बाहिरी घेरामा रहनुहुने ६ जना सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। ऊक्त ६ जना बाहेक हामी सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी गराउँदछु।’
निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणपछि प्रचण्ड परिवारको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। यसबारे जानकारी दिँदै प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालले भनिन्, ‘अध्यक्ष लगायत हामी सम्पुर्ण परिवारका सदस्यहरु, सुरक्षाकर्मीहरु र सचिवालयका सदस्यहरुले कोभिड १९ स्वाव परीक्षण गर्दा, बाहिरी घेरामा रहनुहुने ६ जना सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। ऊक्त ६ जना बाहेक हामी सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी गराउँदछु।’
यी ४ कलाकार जस्ले ऐश्वर्याको मजाक उडाएर आलोचनाको शिकार बने
बलिउडमा को-कसको साला, भिनाजु ? हेर्नुहाेस् यी ४ जोडी
सुशान्तको खाताबाट कसले निकाल्याे ५० करोड ? भयाे नयाँ खुलासा
प्रतितोला सुनको मूल्य १ लाख नाघ्यो
डोनाल्ड ट्रम्पले कमिशन मागेपछि…